Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) - Hello Sayarwon
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ)
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) ကဘာလဲ။
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာဆိုတာ ကလေး ၂ ယောက်ရဲ့အရေပြားတွေ၊ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဆက်နေခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေရဲ့ ၄၀ ကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသက်ရှင်လျက်မွေးဖွားလာကြပြီးတော့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တစ်ရက်ပဲအသက်ရှင်ကြပါတယ် ။ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲ ကြီးပြင်းတဲ့အထိအသက်ရှင်ကြပါတယ် ။
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ် ။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ရင်ချင်းဆက်အမွှာဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ရင်ဘတ်အချင်းချင်းဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
သူတို့ဟာ အရမ်းကိုနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်နေလျှင်တော့ ၂ ယောက်ပေါင်းမှ နှလုံးတစ်ခုပဲပါလာတတ်ကြပါတယ် ။
အခြားအဖြစ်များတဲ့ပုံစံကတော့ ဗိုက်ချင်းဆက်အမွှာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာဆိုရင် ရင်ဘတ်ရိုးကနေ ခါးရိုးအထိဆက်နေကြပါတယ် ။ သူတို့တွေဟာ အသည်း ၊ အစာခြေလမ်းကြောင်း သို့ ဆီးသွားလမ်းကြောင်း တစ်ခုပဲ ရှိကြပါ်တယ် ။ နှလုံးတစ်ခုတည်းရှိတာတော့ရှားပါတယ် ။
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဟာ အရမ်းရှားပါးပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးအယောက် ၂ သိန်းတွင် ၁ ယောက်သာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေဟာ ဆက်နေတဲ့ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့အတူ မွေးဖွားလာတတ်ပါတယ် ။ အမွှာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ဆက်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကွာခြားပါတယ် ။..
ရင်ချင်းဆက်အမွှာ – ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ရင်ဘတ်ခြင်း ဆက်နေကြပါတယ်။
ဗိုက်ချင်းဆက်အမွှာ – ရင်ဘတ်ရိုးကနေ ခါးရိုးအထိ အရေပြားတွေဆက်နေကြပါတယ် ။
ခေါင်းချင်းဆက်အမွှာ – ဦးခေါင်းခွံအရိုးချင်းဆက်နေကြပါတယ် ။
ကျောချင်းဆက်အမွှာ – ကျောအောက်ပိုင်း သို့တင်ပါးချင်းဆက်နေကြပါတယ်။
မွေးခါစ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာအများစုဟာ ကြံ့ခိုင်မှုတော်တော်နည်းကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ဟာသူတို့ရဲ့အခြေအနေကို ဂရုတစ်စိုက်နဲံ့အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ရပါမယ် ။
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ ။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းဟာ အမျိုးသမီးရဲ့သားဥဟာမျိုးအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကွဲမသွားလို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုနည်းနည်းပဲကွဲနေတဲ့သားဥဟာ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာအဖြစ် ကြီးထွားလာပါတယ် ။
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာဖြစ်ရခြင်းရဲ့နောက်ထပ်သီအိုရီတစ်ခုကတော့သားဥဟာ ကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ပေါင်းစပ်သွားသောကြောင့်ဟု ဆိုကြပါတယ် ။
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာဟာ မျိုးရိုးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့မျိုးရိုးမှာ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်မှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အောက်ပါဖော်ပြမည့်အကြောင်းအရာသည် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ ။ အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာရှိမရှိကို ပုံရိပ်စစ်ဆေးမှုများနှင့် စမ်းသပ်သိရှိနိုင်ပါတယ် ။
အများဆုံးစမ်းသပ်ကြတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကတော့ ultrasound နဲ့MRI test တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ မွေးဖွားတဲ့အခါ caesarean section လို့ခေါ်တဲ့ C ပုံစံဗိုက်ခွဲမွေးခြင်းကိုပြုလုပ်ရပါမယ်။ မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ကလေးတွေဟာ ဘယ်လိုဆက်နေတယ် ၊ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ သိရဖို့အတွက် ပုံရိပ်ဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရပါမယ် ။
Conjoined Twins (ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သူတို့ဟာ ဘယ်လိုဆက်နေတယ်ဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကုသကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့အတွင်းအင်္ဂါတွေပါဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်များတဲ့အတွက် သူတို့ကို ခွဲပစ်ဖို့ခိုအပ်ပါတယ် ။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဟာ ခွဲနိုင်ကြောင်းပြပြီး မိဘတွေကလည်း ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ောတ့ဆရာဝန်ဟာ ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ် ။ ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ကလေးတွေဟာ အခြားကလေးတွေလိုပဲ ကြီးပြင်းနိုင်ပါပြီ ။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုသမှုများ ။
ဘယ်လိုနေထိုင်မှုပူံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုသမှုတွေက ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာကို အဆင်ပြေပြေနေထိုင်နိုင်စေမလဲ။
ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွေအားလုံးဟာ ခွဲစိတ်၍မရနိုင်ပါဘူး ။ ဒီလိုကလေးတွေဟာ သူတို့မိသားစုနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေဆီက ဂရုစိုက်မှုကို အထူးလိုအပ်ပါတယ် ။
အကယ်၍ သင့်တွင် သို့ သင့်မိသားစုတွင် ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာရှိရင်တော့ သူနာပြုတွေ ၊ အာဟာရပညာရှင်တွင်၊ကလေးဆရာဝန်တွေဆီကနေ လေ့ကျင့်မှုသင်ယူထားရပါမယ် ။ ဒါဟာ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာကို ဂရုစိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းကိုရှာဖွေရာမှာ ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည် ။
အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိသေးလျှင်တော့ အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
Facts about the twins http://umm.edu/programs/conjoined-twins/facts-about-the-twins. Accessed July 27, 2016.
What are conjoined twins? http://www.seattlechildrens.org/medical-conditions/chromosomal-genetic-conditions/conjoined-twins/, Accessed July 27, 2016.
ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးမှာ ဦးခေါင်းခွံပါမလာခြင်း ( Anencephaly) အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ။ ။
Therapeutic aboration ( တရားဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း) လုပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ။ ။